Connecticut WIC အစားအစာလမ်းညွှန်စပိန် | JPMA, Inc
Efectivo 1 က de enero က de 2019
Consejos De Compra Exitosos
လက်ခ်၊ လီချက်ဒီယို၊ Leche De Cabra, Queso, Huevos, Tofu, Yogurt
Jugo para niños, Jugo para mujeres
Cereales Fríos, Cereales Calientes
ပန် / Granos enteros
ပန်, Tortillas, Arroz Integral, ခေါက်ဆွဲ
Mantequilla de maní, Guisantes, Habichuelas, Lentejas
Consejos Para Compras က de eWIC
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကို Verifica las fechas del período de
WIC ကနေ Connecticut မှတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး identificar los artículosမှဤအခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်။
WIC မှ esta Guerre de alimentos နှင့်asegúrate de teneras las cantidades correctas as rob ap benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici benefici အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုစာရင်းပြုစုရန်။
တစ် ဦး mitac de la transacciónအနေဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါ ..
သင်တစ် ဦး မှတစ် ဦး ကကူညီပေးပါ။
transacción de descuento မင်္ဂလာပါ
Lácteos, Queso, Huevos, Tofu, Yogurt
Leche fluida: Descremada (sin grasa), ၁% (baja en grasa), 1% (reducida en grasa), Entera (para niños de2မှ 12 meses)
Leche agria ('Buttermilk'), leche orgánica, con sabores añadidos, leche cruda
64 onzas / medio galón, ရေခဲသေတ္တာ
Pacific Ultra Soy မူရင်း (En las góndolas sin sabor añadido, 32 oz)
Lata de 12 onzas sin grasa, 2%, entera (ဗီတာမင် D añadida)
Meyenberg (líquida enlatada o en polvo)
Opciones de Leche adicionales
Boh contenido de lactosa o sin lactosa64 oz / medio galon descremada, 1%, 2%, entera
လက်ခ် kosher: descremada, semidescremada, 2%, entera
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် ၁%၊ ၂%၊ အသည်းအသန်ဖြစ်သည်။
Sólo paquetes de 8 OR 16 onzas
Cualquier marca: Americano, Colby / Colby ဂျက်၊ De papa (Cheddar), Monterey Jack, Mozzarella, Muenster
Mozzarella Sin grasa, pre-empaquetado, Marca: Calabro, Polly-O
ကုန်ပစ္စည်းများ, တစ် ဦး ချင်းစီ၏ envueltas, comidas con မေးခွန်း, ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းသူများအဘို့အမေးစရာများ, တင်သွင်း, con sabores añadidos, မေးခွန်းများ
Mediano, Grande, အပို Grande y Jumbo - paquete de 1 docena
Paquete က de 8 o 16 onzas, ရိုးရှင်းသော
နာဆာယာ en cubos, súper firme, firme, ligéramente firme, sedoso, súper firme en cubos
Azumaya: Firme အပို firme
သဘာဝကတိ Firme အပို firme
အိမ်အစားအစာများ: : Firme, အလတ်စား Firme, အပို Firme
စုစုပေါင်းစားနပ်ရိက္ခာစုစုပေါင်း 8 o 16 onzas ။
Sin Grasa o Bajo en grasa
1 cuarto / bote ကနေ 32 onzas, Paquete က de4o ကနေ 8 vasos de4onzas
* YOGUR DE LECHE ENTERA (PARA NIÑOS DE 12 A ၂၃ MESES)
Tinas က de 32 onzas
Big Y ကို
Dannon အားလုံးသောသဘာဝ *
Dannon အလင်း & Fit
Desi သဘာဝ Dahi *
J & J ကိုရှာ
La Yogurt Probiotic *
PICS / စျေး Chopper
Stonyfield ခြံချောမွေ့ *
Paquetes de4vasos de4onzas
Paquete de 8 vasos က de4onzas
ဒိန်ချဉ် griego, edulcorantes တု (Lite / light)
Jugo en botella, Jugo De Vegetales, Jugos ရေခဲသေတ္တာ, Jugos Concentrados
Los sobrantes de Jugo de 47.9 onzas - menos no se puede comprar ။ 12 စင်တီမီတာ 48 တန်းနှင့်ညီမျှသည်ညီမျှသောတစ် ဦး က Jugo အာရုံစူးစိုက်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေး။
Manera de comprar la cantidad completa:
စုစုပေါင်း 96 ကနေဒီကြမ်းပြင်, အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများ2ပါဝင်မှု 12 လက်အောက်မှ Jugo အာရုံစူးစိုက်မှု။
စုစုပေါင်း ၁၂၈ ယူနစ်ရှိပြီး ၆၄ အောင်စ ၂ လုံးပါဝင်သည်။
စုစုပေါင်းအနေဖြင့် ၂၄၀ အောင်စတွင်ရှိပြီး ၂ ချက်လက်အောက်တွင် ၁၂ အောင်စရှိသည်။ ၂ ခုတွင် ၆၄ ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘော့တလာများနှင့်အဆင့် ၄ ဆင့်ရှိသည့် ၄ င်း၏ ၃၄ ခုတွင် ၆၄ ခုပါဝင်ပြီး ၁၂ ခုအနေဖြင့်အပြည့်အ ၀ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။
Botella က de 64 onzas
အယ်လ် menos 120% က de Vitamina ကို C
တရုတ် / NARANJA
64 ဏ 128 onzas
Fortificado con calcio
sodio bajo en sodio
Jugo / mezclas de toronja
Todas las mezclas de jugo
11.5 - 12 onzas, 100% jugo y al menos 120% de Vitamina C
DE TODOS LOS JUGOS - အဘယ်သူမျှမ compres
ဤရွေ့ကား, jugo con azúcarañadida o edulcorantes
Frutas y vegetales နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများ
Enterado, precortado, desmenuzado o envasado: vendido en bolsas, cajas, por pieza, libra သို့မဟုတ် paquete
Ensalada က y / o ဟင်းသီးဟင်းရွက် mixtas en bolsa
Artículos de la Barra de ensaladas, bandejas para fiestas, canastas de frutas, frutas secas, bocadillos de frutas ။ Ensaladas / kits envasados ​​con aderezos, carnes, sueces, croutones, queso añadidos, စသဖြင့်
Frutas Y Vegetal CONGELADAS
Cualquier marca / variedad y tamaño
Frutas o vegetales naturales o mezclas sencillas
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများ၊ သစ်တော်သီးများ၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်များ၊
အဘယ်သူမျှမက debe estar empaquetado con salsa, pasta o arroz ။
Enlatadas သို့မဟုတ် envase plástico permido
တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် Envasado နှင့် bote, ဤသည်ကိုခွင့်ပြုသည်
Escoja cualquier marca de tienda
combinaciones de frutas တွင်ပါဝင်သည်
Ensalada de Frutas, အရောင်ဖျော့ဖျော့ sin calorías
Salsa က de tomate / espaguetis ရိုးရှင်းသော enlatada
အပင်များ၊ အချိုများ၊ sal (fruta), salsa de arándanos, relaños de pay, cóctel de frutas, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးသည့်အပင်များ၊
Frutas y Vegetales မှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ။
[ezcol_1third] အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိသူများအနေဖြင့်အချိုးအစားညီမျှမှုကိုရရှိသည်။ [/ ezcol_1third] [ezcol_1third] WIC1 ၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအနေဖြင့်လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများနှင့် WIC1 [/ ezcol_] တွင်စာရင်းပြုသူများ။ [ezcol_1third] သစ်သီးဝလံများနှင့်အသီးအနှံများသည်သစ်သီးဝလံများနှင့်စားသောက်ကုန်များကိုစားသုံးရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ၊ EBT, SNAP နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ [ezcol_1third] [ezcol_1third] [ezcol_XNUMX Siird] eWIC သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသစ်သီးဝလံများနှင့်အသီးအရွက်များဖြစ်သည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအနေဖြင့် [/ ezcol_XNUMXthird_end]
အစေ့ para bebés
8 enzase မှဤသည်
Elige က de cualquier marca
Variedades qu incluyen DHA, fruta, ပုံသေနည်းသို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်
FRUTAS Y VEGETALES PARA BEBÉS
သင်4en 8 enzas en tamaño del envase
Elige ပါဝင်ပစ္စည်းများသီးခြားပုဂ္ဂိုလ်များ o combinaciones de frutas y vegetales (ဥပမာ၊ manzana-plátano, manzana-batata, etc)
သန္ဓေသားလောင်း o en bolsitas
DISPONIBLE SÓLO PARA BEBÉS DE6A 11 MESES တော် ၀ င်တော်ဝင် LECHE EXCLUSIVAMENTE MATERNA
Carne para ဘီဘီစီ
Frasco က de 2.5 onzas
2.5 enzase မှဤသည်
res, caldo / ဟင်းရည်က de res
Pollo, caldo / ဟင်းရည်ကပိုပိုလို
Jamón, caldo / gravy de jamón
Pavo, caldo / ဟင်းရည်က de pavo
DHA / ARA ၏နာရေးသတင်း၊ sal, azúcar, questiono, သီးနှံသို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲများ
COMPRA SÓLO 12 အိုဇတ် o más
Todos los cereales listados en púrpura son de grano entero ။
Berry ဟာ Kix
ဘလူးဘယ်ရီ Chex (Chex de Arándanos)
သစ်ကြံပိုး Chex (arroz y canela)
Corn Chex (maíz)
Rice Chex (arroz)
ဂျုံ Chex (trigo)
Fiber One Clusters (trigo, maíz, avena, arroz, salvado, cebada)
ဖရန်အားလုံးသည်ဂျုံမှုန့်များ (Hojuelas de trigo)
ပြောင်းဖူးအလွှာ (Hojuelas de maíz)
Shredded Wheat (trigo)
အထူး K (mezcla de arroz, trigo, y cebada)
Crispix (arroz y maiz)
စပါး Krispies (arroz)
Crispy ဆန် (arroz)
Frosted Mini Spooners (trigo)
စပျစ်သီးအခွံမာသီး (Cereal de trigo y cebada)
စပျစ်သီးအခွံမာ (hojuelas de trigo y cebada)
Oats ၏ပျားရည်စေ့ (Cereal de avena)
Vanilla Multi အစေ့
Oat Bran (salvado de avena)
Bran Flakes (Hojuelas de salvado)
Nutty Nuggets (Cereal de trigo y cebada)
Oat ပညာရှိ (သီးနှံ de avena)
ပျားရည် Oats & အလွှာ (Hojuelas de avena y miel)
လှော်လှော် Oats (လွင်ပြင်) (Cereal de avena)
Crispy ပြောင်းဖူးရင်ပြင် (maíz)
Shredded Wheat (frosted) (trigo)
• Frosted Shredded Wheat (trigo)
•ပြောင်းဖူးအလွှာ (Hojuelas de maíz)
• Toasted Oats (Cereal de avena)
Crunchy Oats (Cereal de avena)
Frosted Shredded Wheat (trigo)
ပေါင်မုန့် (Cereal de avena)
သခွားမွှေးသောပျားရည် Oats (Cereal de avena)
Crunchy Nuggets (Cereal de trigo y cebada)
Honey Oat Flakes (Hojuelas de avena)
မြည်းစမ်း (Cereal de Avena)
Rollin Oats (Cereal de avena)
ပျားရည်နှင့် Oat ရောနှောစက် (Avena)
ကောင်းသောရွေးချယ်မှု Oat ရင်ပြင် (သီးနှံ de avena)
လှော် Oats (လွင်ပြင်) (avena)
ကောင်းသောရွေးချယ်မှု Oat အကြပ်အတည်း (avena)
လှော် Oats (Avena)
ကိုက်ခဲသော Shredded ဂျုံ (trigo) ကိုက်
ပျားရည် Oat အစုအဝေး (Avena)
ပျားရည်နှင့် Oats နှင့်ပိုများသော (avena)
Oats & ပိုများ (Avena)
Wheat Bran Flakes (Hojuelas de salvado de trigo)
Frosted Shedded Wheat (trigo)
Honey Crunchin 'Oats (Cereal de avena)
Oat Square (သီးနှံ de avena)
Oats & O's (Cereal de avena)
အဆီအခမဲ့ပြောင်းဖူးအလွှာ (Hojuelas de maíz)
အဘယ်သူမျှမ Comprar: Instantáneo
Cream of Rice (arroz)
MOM မူရင်းပူဂျုံသီးနှံ (trigo)
ဗားမောင့်စတိုင်မေပယ် Oatmeal (Avena)
Creamy ဂျုံ (trigo)
Oat Bran Hot သီးနှံ (salvado de avena)
Pan / Granos Integral
Pan 100% de trigo integral / grano integral * 1 onzas o 16 Paacete de XNUMX libra
Alvarado လမ်းမုန့်လုံးလုံး (trigo integral)
Arnold Stoneground ဂျုံလုံး (trigo integral)
ဂျုံဘုံလုံး (trigo integral)
နိုင်ငံမီးဖိုချောင်သုံးဂျုံလုံး (trigo integral)
Geissler ၏လုံးလုံးဂျုံမုန့် (trigo integral)
Gold Medal Bakery လုံးဂျုံ (trigo integral)
Flaxseed ဖြင့်ရွှေ medal Bakery ဂျုံ (trigo con semillas de lino)
Holsum လုံးဂျုံ (trigo integral)
Krasdale 100% ဂျုံလုံး (trigo integral)
Penn Street တစ်လုံးတည်းဂျုံ (trigo integral)
Pepperidge Farm အလွန်ပါးလွှာသော ၁၀၀% ဂျုံ (trigo integral ၁၀၀% muy fino)
Pepperidge လယ်ယာလုံးတစ်ဝိုက်လုံး (trigo integral triturado)
Sara Lee ၁၀၀% လုံးလုံး (trigo integral)
Stern ၏တစ်လုံးတည်းသောဂျုံ (trigo integral)
Sunbeam လုံးဂျုံ (trigo integral)
ဂျုံလုံးတစ်မျိုးတည်းသုံးခြင်း (trigo integral)
လေရဟတ်စက်ခြံကျောက်ခေတ် - Menzanos (menzanos triturados)
လေရဟတ်စက်ခြံကျောက်ခေတ် -Hamotze (hamotze triturados)
Wonder Whole Wheat (trigo integral)
အကောင်းဆုံးဂျုံလုံး (trigo integral)
Big Y လုံးလုံးဂျုံ (trigo integral)
ဗဟိုစျေးကွက်ဂန္တလုံးလုံးဂျုံ (trigo integral)
ဂရိတ်တန်ဖိုး ၁၀၀% ဂျုံ (trigo integral)
အဓိကသော့ချက်အစားအစာများဂျုံ (trigo integral)
သဘာဝရိတ်သိမ်းမှုလုံးလုံးတည်းသောဂျုံ (trigo integral)
ShopRite ဂျုံလုံး (trigo integral)
မျှတသောမျှမျှတတရှိသောဂျုံ (trigo integral)
လုံး ၀ ဂျုံရပ်တန့်ခြင်းနှင့်စျေး ၀ ယ်ခြင်း (trigo integral)
Flaxseed ဖြင့်ဂျုံတစ်လုံးကို Stop & Shop (trigo integral con semillas de lino)
အဘယ်သူမျှမဆားငန်လုံးတလုံးတည်းသုံး (Stopo & Shop) (trigo integral sin sal añadida)
Urban Meadow Whole Wheat (trigo integral)
Bagels, pan delicatessen, pan blanco, pan de panadería
အဓိကအားဖြင့်ဂဏန်းပေါင်း (၁၆) ခုပါဝင်သည်။
Chi-Chi ၏လုံးလုံးဂျုံ (trigo integral)
Chi-Chi's White Corn (maíz blanco)
Don Pancho လုံးကျိုး (trigo integral)
Don Pancho White Corn (maíz blanco)
Lafe Corn (maíz)
La Banderita Corn (maíz)
La Banderita လုံးဂျုံ (trigo integral)
La Poblanita ပြောင်း (maíz)
မာယာခြံများလုံး ၀ (trigo integral)
မစ်ရှင်လုံးဂျုံ (trigo integral)
Ortega လုံးကျော (trigo integral)
ပီတီပီဂျီလုံး (trigo integral)
အပူပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှရသောဂျုံ (trigo integral)
Marcas de la Tiendas
Food Club တစ်လုံးတည်းသောဂျုံ (trigo integral)
IGA ဂျုံလုံး (trigo integral)
ကျွန်ုပ်၏ Essentials လုံးချုံ (trigo integral)
Nature's Promise လုံးနှံပြောင်း (maíz integral)
Nature's Promise လုံးကျိုး (trigo integral)
ပြောင်းဖူးဖြူကိုရပ်ပြီးစျေးဝယ်ပါ (maíz blanco)
အဝါရောင်ပြောင်းဖူးကိုရပ်ပြီးဆိုင် ၀ ယ်ပါ (maíz amarillo)
1-14 onzas ဏ Bolsa / caja က de 16 libra
အကောင်းဆုံးသော်လည်း Grano largo
ကာရိုလိုင်းနား Arroz အရေးပါသော
Goya Arroz အရေးပါသော
မိနစ် Arroz integral
Mahatma Arroz အရေးပါသော
အောင်မြင်မှု Arroz အရေးပါသော
ကို C & F ကိုCocción en bolsa
C & F Instantáneo
C & F Grano largo / corto Instantáneo
ဦး လေးဘင်၏Instantáneo de grano အရေးပါသောrápido y ကသဘာဝ
ဦး လေးဘင်ရဲ့ Grano အရေးပါသောသဘာဝ
ဦး လေးဘင်ရဲ့Cocción en bolsa de grano integral
Big Y လက်ငင်းInstantáneo
မရှိမဖြစ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Arroz အရေးပါသော
Food Club Cocción en bolsa
ဂရိတ် Value ကို Arroz အရေးပါသော
IGA Grano largo
စျေးကွက် Pantry Arroz အရေးပါသော
PICS / စျေး Chopper Cocciónနှင့် bolsa
Signature မီးဖိုချောင်များ Arroz integral
Shurfine Arroz အရေးပါသော
Shurfine Arroz အရေးပါသောအရာ
Cocción en bolsa ကို Stop & Shop
Stop & Shop Instantáneo
White ကနှင်းဆီ Arroz အရေးပါသော
Arroz blanco, arroz con condimentos တစ် granel, arroz orgánico
1 onzas ဏ Paquete က de 16 libra
100% က de trigo Integral / grano ခေါက်ဆွဲ
Barilla ဂျုံ / လုံးအစေ့ (trigo integral)
Delallo အော်ဂဲနစ်လုံးကျိုး (trigo integral)
အပြည့်အဝစက်ဝိုင်းအော်ဂဲနစ်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သည့်ဂျုံ (trigo integral)
Gia Russa လုံးဂျုံ (trigo integral)
Hodgson Mill လုံးကျုံ (trigo integral)
Luigi Vitelli ဂျုံလုံး (trigo integral)
ရက်ကတိုဂျုံလုံး (trigo integral)
Ronzoni ကျန်းမာသောရိတ်သိမ်းဂျုံလုံး (trigo integral)
ShopRite 100% ဂျုံလုံး (trigo integral)
Shurfine လုံးဂျုံ (trigo integral)
Frasco က de 16 ဏ 18 onzas
သဘာဝအပြစ် Sabor añadido, suave, cremosa o con trozos permidaida
Con sabores añadidos, orgánica
Guisantes, Habichuelas y Lentejas
၁ libra (၁၆ ခု)
ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသော de chícharos secos, lentejas ဏ frijoles
Guisantes, Habichuelas, Lentejas ENLATADOS
Lata က de 15 ဏ 16 onzas
Artículos con azúcaresañadidos, grasas, aceites, verduras, frutas o carnes, frijoles cocidos
PARA CIERTAS CATEGORÍAS DE MUJERES EMBARAZADAS Y QUE ESTÁN AMAMANTANDO:
agvas o en acuaite ။ ဤသည်ကိုခွင့်ပြုပါ။
Lata က de5onzas; sóloatún en trozos bajo en grasa
Lata က de 5-15 onzas
Lata က de 3.75 onzas
Consejos မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့် eWIC:
eWIC သည် Connecticut မှကွန်ယက်တီထွင်သူများထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ WIC၊ ဒေသတွင်းရှိကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဒေသများသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စာရင်းပြုစုပြီးပါပြီ။ www.ct.gov/dph/wic y escoge el rótulo Minorista (လက်လီအရောင်းဆိုင်များ) WICShopper နှင့် WIC clop en WIC သက်သေပြသူများ WIC ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။
WIC မှစာရင်းပြုစုပြီးသောကုန်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Los benefos ခံစားခွင့်específicosala necesidad del participante ယခုအချိန်တွင်, အဘယ်သူမျှမ todos los productos enumerados en la guía de alimentos son elegibles para su compra ။
ဥပမာ - WIC မှ ၀ င်ငွေအခွင့်အလမ်းများနှင့် WIC မှ ၀ ယ်ယူသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်သည်။
WIC aparezcan en este folleto မှဤကဲ့သို့သော los alimentos aprobados ။ WIC မှထုတ်လုပ်သည့် WICShopper နှင့် Scan Barcode ကိုအသုံးပြုခြင်း (Escanee el código de Barra) ။ Connecticut WIC ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် ၀ မ်းသာစရာကောင်းသည်။ ၀ မ်းသာသည်။ WIC မှအခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။
El cajero debe escanear toos los productos seleccionados ။
သင့်လက်အောက်ခံများအနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ Tambic သည် pice plame llamaraoficina estatal de WIC al 1-800-741-2142 ။ ထုတ်လုပ်မှုပြ,နာများသည်ပြproductနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
benefici မိသားစု ၀ င်များစာရင်းထဲရှိပါသလား။
WIC ၏ဒေသတွင်းရှိ WIC သည်ထိုဒေသတွင်နေထိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် WIC ၏လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော WIC နှင့်အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များကိုရယူသည်။ သင့်အနေဖြင့်အခွင့်အလမ်းများပိုများစေသည်။
benefici မိသားစု ၀ င်များအနေဖြင့်မိသားစု ၀ င်များစာရင်းလုပ်ရန်သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ရမည်နည်း။
မဟုတ်ပါ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသောမိသားစုများစာရင်းကိုစာရင်းသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ တာ ၀ န်ရှိသူသည်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တာ ၀ န်ခံမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
WIC သည်“ အပြန်အလှန်ဖြည့်စွက်ခြင်း” အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်သည်။ WIC သည်ဤအရာသည်ကျေနပ်စရာကောင်းသည့်အာဟာရဓာတ်များကိုရရှိသည်။ Tendrá que comprar alimentos adicionales por su cuenta ။ ဒေသတွင်းရှိဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းများသည် asistencia alimentaria adicionales, si es necesario တွင်ပါဝင်သည်။
us Puedo guardar los beneficios que no usé para el próximo mes?
IC WIC အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်ပါ ၀ င်မှုလား။
éQué pasa si cambio de domicilio?
ဒေသတွင်းရှိ WIC နှင့်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ WIC နှင့်ဒေသတွင်းရှိဒေသများရှိဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမှန် CT ဦး စီးဌာန